Tue, Sep 29, 2020 at 4:05pm
काठमाडौं, १२ असाेज । एनएमबि बैंक एओएको प्रतिनिधिको रुपमा पीसीएएफको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएको छ । नेट जेरो एसेट ओनर एलायन्स 'एओए'सँगको सहकार्यमा पीसीएएफले एनएमबि बैंकलाई एओएको प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गरि नेतृत्व स्तरमा स्वागत गरेको हो । पीसीएएफ वित्तीय संस्थाहरूको विश्वव्यापी साझेदारी हो जुन उनीहरूको कर्जारलगानीसँग सम्बन्धित ग्रीनहाउस ग्यास 'जीएचजी' उत्सर्जनको आकलन गर्न र खुलासा गर्न एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोणको विकास र कार्यान्वयन गर्न..
काठमाडौं, १२ असाेज । सन्राइज बैंकले बाँकेको सीतापुर, खजुरामा ५० औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको खजुरा २ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नन्दलाल गुरतालले गरेका हुन । पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यस सेवाबाट ग्राहकवर्गले निक्षेप..
काठमाडौं, ८ असाेज । सिभिल बैंकले किसानहरुको समृद्धिको लागि किसान समृद्धि कार्डको सुविधा संचलनमा ल्याएको छ । देशको कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीनिअनुरुप सम्पूर्ण कृषकहरुको समृद्घिको लागि बैंकले यस कार्ड सेवाको सुरुवात गरेको हो । कुनै पनि कृषि पेशामा आवद्ध ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो सेवाबाट कृषि कार्यबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई नियमित रुपमा बचत गर्दै जाने तथा आवस्यक परेको बखतमा उक्त बचत..
काठमाडाैं, ८ असाेज । सनराइज बैंकले काउन्टर मार्फत नगद झिक्ने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन डिजिटल टेलर 'Digital teller' सेवा सुरु गरेको छ । चेक तथा एटिएम कार्ड नभए पनि बैंक खाताबाट नगद झिक्न मिल्ने गरी बैंकले यो सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवाको सुरुवातसँगै अब बैंकमा खाता हुने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप्लीकेसन सनराइज स्मार्टको प्रयोग गरी बैंकका काउन्टरहरुमा रहेका क्यूआर कोड..
काठमाडौं, ८ असाेज । एनआईसी एशिया बैंकले तीन महिना वा सो भन्दा बढि भाका नाघेका कर्जाहरूको ब्याजदर ८.९९ प्रतिशत कायम गर्न २३ दिन बाँकी रहँदा समयमा नै फाईदा उठाउन आफ्ना ऋणीहरुलाई आग्रह गरेको छ । बैंकले कोभिड १९ बाट आफ्ना ऋणीहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सहुलियतका योजनाहरू ल्याइरहेको ल्याइरहेको छ । यसैक्रममा बैंकले साउन मसान्तसम्म ३ महिना वा बढीले बक्यौताको..
काठमाडौं । सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ । ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सोमबारको निर्णयबमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा..
काठमाडाैं, ५ असाेज । देशको बैंकिङ्ग इतिहासमै पहिलो पटक एनआईसी एशिया बैंककाे अनलाइनबाटै भाैचर भर्न सकिने भएकाे छ । ग्राहकले आफ्नो घर वा अफिसबाटै मोबाइल वा ल्यापटपकाे प्रयोग गरी बैंकको चेक आफ्नो वा आफूले चाहेको खातामा जम्मा गर्न अनलाइनबाटै भौचर भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेकाे हाे । ग्राहकले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत https://www.iserve.nicasiabank.com लिंकमा गई चेक जम्मा गर्न डिजिटल माध्यमबाट भौचर भर्न सकिने बैंकले जनाएकाे छ। उक्त लिंक..
काठमाडौं, ५ असाेज । अब नबिल बैंकका ग्राहकहरूले आवश्यकता अनुसार मोबाइलबाटै लोन लिन सक्ने भएका छन् ।नबिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक फोनबाट आवश्यकता अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण मोबाइलबाट लिन पाउने व्यवस्था गरेकाे हाे । यस सेवामार्फत निवेदन दिएको केही मिनेटमै ग्राहकको ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’ मार्फत खातामा ऋण उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा लिन नबिलको स्मार्ट बैंक प्रयोगकर्ता हुनुपर्ने र यस..
काठमाडाैं, ५ असाेज । यसपटककाे दशैंमा नयाँ नोट बजारमा पठाउने/नपठाउने विषयमा राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा परेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पहिले जस्तो दशैंमा रमझम नहुने पक्का छ, त्यसैले राष्ट्र बैँकले पनि नयाँ नोट वितरणको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । नयाँ नोट वितरण गर्दा भीडभाड हुन सक्ने भएकाले नोट वितरण नै नहुन सक्ने सम्भावना पनि छ । दशैंमा थप रौनक..
काठमाडौं, ४ असाेज । एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल ‘प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थ’ बाट विभुषित भएका छन् । संविधान दिवस २०७७ को अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिष्ठित उद्योगी अग्रवाललाई ‘प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थ’ द्वारा विभूषित गरिएको हो । अध्यक्ष अग्रवाल पाँच दशक देखि देशको उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रमा अनवरत रुपमा एक सफल उद्योगी व्यवसायीको रुपमा लागिरहेका छन् । सर्वाङ्गीण आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय..
असोज २, काठमाडौं । एनसीसी बैंकले ५ लाख कित्ता संस्थापक शेयरकाे विक्री खुला गरेकाे छ। नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले ५ लाख कित्ता संस्थापक शेयर असोज २ गतेदेखि विक्री खुला गरेको हाे । कम्पनीले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको उक्त शेयर लिलामी प्रक्रियाबाट विक्री खुला गरेको हो । कात्तिक ६ गतेसम्म विक्रीमा रहने यो शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १ हजार कित्ताको लागि..
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मध्येनजर गर्दै चाडपर्व योजना ल्याएको छ । नबिल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खाता, साना तथा मझौला कर्जा, धितो कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट तथा घर कर्जामा अत्यन्त आकर्षक योजना शुरू गरेको हो । व्यक्तिगत मुद्दती खाताहरूमा उच्च ब्याज दर आर्जन प्रदान गर्ने र कर्जाको हकमा सोको लागत घटाउने हुनाले यस योजनाले महामारीको कारण हुने आर्थिक कठिनाइ कम गर्न..
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक परिपत्र जारी गर्दै आगामी असोज मसान्तभित्रै स्थिर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशिका २०७७’मा उल्लेख भएको स्थिर ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सोही समयभित्र कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। आज जारी गरिएको परिपत्रमा भनिएको..
काठमाडौं, ३१ भदौ । अब एक र दुई रुपैयाँको सिक्कामा नेपालकाे नयाँ नक्सा राखिने भएकाे छ । सरकारले नयाँ नक्सा राखी एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँको सिक्का निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको हाे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नक्सासहितको सिक्का निष्कासनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ नक्सा राखेर सिक्का निष्कासन गर्नका केन्द्रीय बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए..
काठमाडाैं, २२ भदाै । अब बैंक एटिएम नछाेइ मोबाइल प्रयोग गरेर एटिएमबाट नगद पैसा झिक्ने प्रविधि भित्रिने भएकाे छ । महामारीलाई ध्यानमा राखेर बैंकहरूले मोबाइल एप्समार्फत नै एटिएम प्रयोग गर्ने प्रविधि भित्र्याउने भएका छन् । छुँदासमेत संक्रमण हुन सक्ने कोभिड–१९ जस्तो महामारीको जोखिमबाट बच्न यस्तो प्रविधि उत्तम हुने सानिमा बैंकका आइटी विभाग प्रमुख विक्रम श्रेष्ठले बताए । ‘यो सुविधा दिन एटिएम मेसिनलाई फेर्नुपर्दैन, सफ्टवेयर विकास..
ग्राहकले एटीएम कार्डबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकाल्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि एटीएमबाट हुने प्रतिपटक र दैनिक कारोबारका लागि मात्र सीमा तोकिएको थियो । अहिले मासिक कारोबारको सीमा पनि तोकिएको हो । एटीएमबाट धेरै रकम बाहिरिएको सूचनाका आधारमा मासिक सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको..
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जुनसुकै संस्थाको एटीएम कार्ड प्रयोग गरे पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले कोरोनाका कारण नागरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने अवस्था नभएकाले जुनसुकै संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले यस्तै निर्देशन जारी गरेको थियो। गत चैत ११..
काठमाडौं। सिभिल बैंक लिमिटेडले 'प्रिमियम बचत खाता' बचत खाता योजना ल्याएको छ। बैंकले बचत खातामा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ। यस बचत खाताको न्युनतम मौज्दात १० हजार रहेको छ। उक्त खाता खोल्दा बैंकले ग्राहकहरुका लागि निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम कार्ड, एसएमएस बैंकिङ् सेवा पनि प्रदान गर्नेछ। यसको अतिरिक्त बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पनि ८.७५ प्रतिशतको सर्वाधिक ब्याजदर प्रदान गर्दै आईरहेको..
काठमाडौं । डिजिटल माध्यममा नयाँनयाँ सेवा र सुबिधाहरु प्रदान गर्दै अघि बढिरहेको सनराइज बैंकले महिलाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सनराइज नारी बचत खाता सुरुवात गरेको छ । तीजको विशेष अवसर पारेर सुरुवात गरेको उक्त खाताले महिलाहरुको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकको विश्वास छ । उत्सवको मौसमलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले उक्त खाता शुन्य मौज्दातमा खोल्न सकिने व्यवस्थाका साथै पहिलो वर्ष निःशुल्क डेबिट..
काठमाडौं, ४ भदाै । बैंकका कर्मचारीलाई प्रशासन र प्रहरीले बाटैमा रोकेर कार्यालय जान अवरोध गरेपछि बिहीबार उपत्यकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द भएका छन् । कर्मचारीहरु कार्यालय जान नपाएपछि नेपाल बैंकर्स संघले बिहीबारको लागि उपत्यकाका सबै शाखाहरु बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साताको लागि उपत्यकामा निशेधाज्ञा जारी गरे पनि न्यूनतम बैंकिङ सेवालाई सुचारु राख्न प्रशासनले सहमति लिएको..
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा पैसा पठाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र वायरबारली बीच विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतापछि अस्ट्रेलिया, अमेरिका न्यूजिल्याण्ड तथा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुले त्यहाँस्थित कुनै पनि बैंकमा रहेको आनो खाता प्रयोग गरी वायरबारलीको मोबाइल एप मार्फत अनलाइन पोर्टल प्रयोग गरि नेपालमा रकम पठाउन सक्नेछन् । वायरबारलीको मोबाइल एप..
नबिल बैंक लिमिटेडले आºना ऋणीलाई शुन्य दशकलव २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीबाट आºना ऋणी गम्भीर समस्यामा परेपछि बैंकले शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत छुट दिएको हो । ग्राहक मैत्री पहिचान बनाएको नबिल बैंकले साउनमा आºना सबै ऋणी ग्राहकहरूलाई ०.२५ प्रतिशत ब्याज दर घटाएको छ । यस्तो छुट खराब कर्जाका ऋणीले प्राप्त गर्ने छैनन । बैंकको यो प्रयासले..
प्रभु बैंक लिमिटेडले आन्तरीक राजश्व कार्यालय जोरपाटी, काठमाण्डौंको राजश्व संकलनको सम्पुर्ण कारोवार आज मिती २०७७÷०५÷०१ दिनदेखि प्रभु बैंकको जोरपाटी शाखाबाट सुरु गरेकोे छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विभिन्न सरकारी निकायहरुको बैंकिङ्ग कारोबार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको प्रभु बैंकले आन्तरीक राजश्व कार्यालय जोरपाटीको पनि राजश्व संकलन गरेर आप्mनो सेवा विस्तार गर्न सफल भएको छ । प्रभु..
काठमाडौं, १ भदाै । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइशोलेशनमा बसेका छन् । कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएपछि गभर्नर अधिकारी आइसोलेसनमा बसेका हुन् । गभर्नर अधिकारी गत शुक्रबारबाट आइसोलेसनमा बसेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एक इन्जिनियरले ब्रिफिङ गर्दा गभर्नर अधिकारी सम्पर्कमा आएका थिए । जसका कारण आफूलाई पनि हुन सक्ने भन्दै गभर्नर अधिकारी आफै आइशोलेशनमा बसेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको..
गत आर्थिक बर्षमा २७ बाणिज्य बैंकले ५४ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख खुद नाफा कमाएका छन् । आइतबार उनीहरुले सार्वजनिक गरेको गत आवको वित्तिय विवरणले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार गत आवमा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ११ दशमलव ९५ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा उक्त बैंकहरुले ६१ अर्ब ६९ लाख भन्दा बढी नाफा कमाएका थिए । बिशेषगरि लकडानउका कारण बैंकहरुको व्याज आम्दानी..
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विशेष परिपत्र जारी गर्दै कोरोनाको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकले ‘कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित कर्मचारीलाई..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिने कर्जाको ब्याजदर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा सस्तो बनेको छ । बैंकको आधारदर ६ प्रतिशत भन्दा कम भएकाले समग्रमा ब्याजदर पनि एकल विन्दुमा झरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकको आधार दर ६ प्रतिशत भन्दा पनि तल ५ दशमलव ९० प्रतिशत कायम भएको बताए । यसमा १ दशमलव २५ प्रतिशत देखि ३ दशमलव २५ प्रतिशत सम्म..
काठमाडौँ , २६ साउन। लाजिम्पाटस्थित एभरेस्ट बैंकको मुख्य कार्यालय र एक शाखा दुई दिनका लागि बन्द गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत दुई जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार र मंगलबारका लागि कारोबार बन्द गरिएको हो । बुधबारदेखि नियमित रुपमा मुख्य कार्यालयबाट सेवा सुचारु हुने बैंकले जनाएको छ । ‘शनिबार लाजिम्पाटस्थित सबै कर्मचारीको परीक्षण गराउँदा दुई जना कर्मचारीमा पोजिटिभ देखिएको थियो,’ स्रोतले..
बेलायतको प्रतिष्ठित प्रत्रिका यूरोमनीले लगातार दोस्रो पटक पनि नबिल बैंक लिमिटेडलाई ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ ९ल्भउब’िक द्यभकत द्यबलप० द्वारा पुरस्कृत गरेको छ । समकालीन बैंकहरु मध्ये बँदलिदो परिवेशमा बैंकले प्रदान गरेको सेवा तथा नाफामा गरेको वृद्धिलगायतलाई आधार मानेर यो अवार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ । नेपालको अग्रणी बैंक नबिललाई समग्र बैकिङ कार्यसम्पादन मूल्याँकन गरि उत्कृष्ठ ठहरिँदै यूरोमनीले पुरस्कृत गरेको हो । सन् १९९२ मा..
काठमाडौं, २० साउन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. उप्रेतीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसअघि १२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डको यसअघिका अध्यक्ष डा.उमाशंकर प्रसादले पदबाट दिएको..
Results 561: You are at page 1 of 19